Amaphrojekthi - i-Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited
2021 YuNan A.rt Pukunga
Izingcezu eziyi-100 1940Z (19 * 40W wash zoom moving head) zisebenze kulo msebenzi wokusebenza futhi zathola izingoma eziningi ezivela kubabukeli nakubakhi bezibane. Abantu bamangazwe ngamakhono ayo okuxuba umbala nokukhanya kwayo futhi bazizwa bemangalisa ngokusebenza kwayo buthule. Njengoba i-760 Watts igeza ikhanda elihambayo, bekuthula kakhulu kusasebenza kule theatre.
Umthombo wokukhanya: 19x40W RGBW 4-in-1 Led
I-angle yokusondeza: 6.5 ° -45 °
Imodi ye-DMX: 19/27 Ch
I-LED 3 ring Effect
Umgubho weminyaka eyi-100 we-China Aerospace Science and Technology Corporation
Ikhanda elihamba iso lezinyosi i-7x60W lithandwa kakhulu kusetshenziswa yonke imisebenzi yohlobo, lo mgubho uthatha izingcezu eziyi-150 760 ukusiza lesi sigaba isethulo nomphumela omuhle.
2021Izwi Eliligugu> Izinhlelo ze-TV
Is is one hot kakhulu TV programme of China in 2021. Kulolu hlelo, abalingani bomculo babheka ingxenye yomculo. Isikhathi ngasinye, abalingani abayisithupha ezindizayo bayabambisana ukucula ngababili. Omunye wabo nabaculi abahlala khona bayabambisana ukwenza ingoma yegolide ndawonye, ​​futhi benze "umncintiswano wengoma yegolide enconyiwe"
2021 I-Sichuan Future Music Festival
ISichuan Future Music Festival ibanjwa kanye ngonyaka, kulo nyaka, izingcezu eziyi-120 zenyosi yezinyosi engu-19x40w ezihambisa ikhanda kusuka ngaphesheya kokukhanya okukhethelwe lo msebenzi.
2021 IYunnan Grand Theatre
Ikhanda elinyakazisa iso lezinyosi elingu-24 * 60W lingaphezu kokukhanyisa imikhiqizo emisha engama-2021, iChinese Yunnan Grand Theatre iyale izingcezu eziyi-100 ukuba zilungele umdlalo. Njengoba isivakashi sishilo, ukukhanya kwaphakamisa isigaba sonke sokudlala. Lokhu kukhombisa ukuthi lokhu kukhanya kukhanya ngokwanele!
Umthombo wokukhanya: 24 * 60W 4in1 RGBW Led
I-Beam angle: 3.5 ° -45 °
Ukusetshenziswa kwamandla ngu-1500W
I-Led ngayinye ilawulwa ingashadile futhi ijika elihle lokufiphaza ngaphandle kweflicker
Ngokuhamba Kwamanje, Ngokuphakeme Kwe-Voltage, Ngokuvikelwa Kokushisa
Imininingwane yomsebenzi olula ingafundwa kwimenyu
IDimenison ingu-354 * 444 * 477mm nesisindo ama-25 kgs
I-China Internation Big Data Imboni Expo
Umcimbi wokuvula iMidlalo yesi-6 yeChongqing
2021 Xi 'Umbukiso Wezithuthuthu